Soo dejisan Dr.Web CureIt 10.0.10 – Vessoft
Soo dejisan Dr.Web CureIt
Dr.Web CureIt – scanner antivirus ah in la ogaado oo meesha laga saaro walxaha xaasidnimo. Software wuxuu ku salaysan yahay Dr.Web antivirus asaasiga ah iyo Caafiya computer oo aan rakibidda antivirus ah. Dr.Web CureIt u saamaxaaya in ay ka saarto Gooryaanka, fayrusyada file, trojans, spyware, iwm software ayaa waxaa si joogto ah updated si loo hubiyo xaaladda ay ku sugan database-antivirus. Dr.Web CureIt u ogolaanaya in ay fuliyaan baaritaan deg deg ah, buuxa ama caadadii of your computer.
Baaritaanka iyo ka saarida waxyaabaha xaasidnimo
Updates joogta ah database-antivirus
Awoodda ay u fuliyaan deg deg ah, buuxa ama caado scan
Dr.Web CureIt Software la xiriira:
Norton 2015 22.5.4.24 Security Premium iyo 2015 22.5.0.124 Security Delux
Antiviruses Software-adda ayaa si aad u ogaato iyo tirtirto faylasha waxyeello. Software wuxuu isticmaalaa matoorada antivirus kala duwan si ay u ilaaliyaan goobaha kala duwan ee nidaamka.
Antiviruses Mid ka mid ah soo saarayaasha ee hormuudka ka ah software antivirus ah. Software wuxuu isticmaalaa xalka ugu dambeeyay cusub oo duurka ku ah ilaalinta ee fayras ee kala duwan iyo hanjabaad network.
English, Français, Español, Deutsch... 360 Total Security 8.8.0.1080
English, Español, Deutsch, 中文... Notepad++ 7.1 Standard iyo Portable
Tafatirka Text editor Qoraalka oo si weyn loo ka mid ah barnaamijyo la isticmaalay. software The diiradda ku tafatirka iyo formatting ee qoraalka ku qoran C ++ luqadda barnaamijyada.
العربية, English, Українська, Français... StaffCop 5.8.887
Network Aalad awood leh amniga macluumaadka shirkadaha. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo dhalin wararka ee muddada la hubo.
English, Українська, Español, Português... Free FLV Converter 7.6.2
العربية, English, Français, Español... Panda Antivirus 2015 15.0.1 Gold, Global, Internet iyo Pro
English, Français, Español, Deutsch... Download Master 6.10.1.1525 Standard iyo Portable